Gnocchi nduku "thermomix" - uzommeputa Como-Quiero - Como Quiero
Gnocchi nduku "thermomix"
800 grams Nduku
5 grams Nnu
300 grams Ntụ ọka (dịghị powder)
1 nkeji Egg
50 grams Grated parm cheese
500 grams Tomato kechoopu
Bee poteto na ịkpụ n'ime oké diski dị ka ma ọ bụrụ na ha na-mmiri. Anyị na-etinye ha n'ime akpa varoma. Anyị na-etinye mmiri na iko na ụfọdụ nnu, ekpuchi beaker na-edebe na akpa ebe varoma. Anyị ịtọọ oge 30 nkeji varoma okpomọkụ, ọsọ 1
Mgbe oge na-agba si, wepụ akpa varoma ya ọnọdụ na-etinye poteto na nkata wepụ mmiri ha pụrụ inwe. Jiri nlezianya na otutu mmiri iko
Ugbu a asa na nkụ iko. Mgbe 50 g ntụ ọka tinyere na esie ya na poteto n'ime. Anyị ịtọọ oge 10 sekọnd, ọsọ 5.
Tinye ndị fọdụrụ ntụ ọka (250 g), egg, grated cheese na ụfọdụ nnu. Ịtọ oge 10 sekọnd, ọsọ 3
Anyị na-etinye niile mgwakota on a floured osisi na floured aka, ka a obi ụtọ. Dabere ụdị nduku Anyị na-eji nwere ike ịbụ a ọzọ ma ọ bụ obere nnyapade uka. Ọ bụ ihe amamihe nwere ntụ ọka nso ma ọ bụrụ na anyị na-ekwesịghị itinye
Anyị were a otutu ihe na-eme ka a warara na aka, inyefe ya na tebụl, ruo mgbe a cylinder banyere 2 cm n'obosara.
Iji a mma ma ọ bụ a spatula bee ya n'ime obere iberibe, akpụ obere gnocchi
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka icho mma anyị nwere ike iji a ndụdụ, inyefe onye ọ bụla gnocchi maka ezé. -ere ngwaọrụ kee ihe ndozi, ma na ndụdụ na-nnọọ mma. Anyị esi nri ha na esi nnu mmiri. Ha ga-adị njikere na a nkeji ole na ole, mgbe ha na-ebili ka elu. Anyị were ha na a slotted ngaji. Anyị na-ejere ha esonyere tomato ihendori
* Nyefee. 371 kcal, 19% nke 2,000 kcal / p tụrụ aro otu ụbọchị
19% Abuba 5%
19% Cholesterol 11%
19% Carbohydrates 29%
19% Mineral 21%
19% Protein 23%
19% Vitamin 41%